ကုမ္ပဏီ၏ကနဦးလုပ်ဆောင်ချက်များ - IME Holdings Group
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ကတိကဝတ်များနှင့်အညီ clients များအား ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်အတွက် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများလိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရန်အတွက်လည်း မှန်ကန်သော အရည်အချင်းရှိသူများအား ကုမ္ပဏီတွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ဆွဲဆောင်ထားခြင်း၊ အရည်အချင်းများ တိုးတက်လာစေရန် ပျိုးထောင်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်သည်။ ကုမ္ပဏီရေရှည်တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများအား ထပ်မံခန့်အပ်ခြင်းသည်လည်း လိုအပ်သည့်အလျောက် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုဖန်တီးနိုင်ရန် ‌ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းလက်စွဲစာအုပ် သည် HR policies များ၏ အခြေခံမူများဖြစ်သကဲ့သို့ ဝန်ထမ်းများ၏ အခွင့်အလမ်းများနှင့် တာဝန်များအား အကျဉ်းချုံးဖော်ပြထားသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ HR အဖွဲ့သည် Executive Management Board မှအတည်ပြုပြဌာန်းထားသော HR strategy နှင့် action plan များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တာဝန်ရှိသူများဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ HR profile
ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အဆုံးတွင် IME Group ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၆၅၄ ယောက်ရှိခဲ့သည်။ (ယခင်နှစ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဝန်ထမ်းဦးရေ ၄၈၄ ‌‌ယောက် သာရှိခဲ့သည်။) စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းဦးရေ၏ ၃၈% သည် IME International မှ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီး ၂၂% သည် IME Construction မှ ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည်။
IME Group အနေဖြင့် ကျား၊မ တန်းတူညီမျှမှု ရှိသော တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းဦးရေ၏ ၄၆% သည် အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ ယခင်နှစ်တွင် ရာထူးတိုးသည့် ဝန်ထမ်းပေါင်း ၇၃ ယောက်ရှိခဲ့ပြီး ၄င်းတို့အနက် ၅၈% မှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။
IME Group ၏ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် အမျိုးမျိုးသော ခံစားခွင့်များရရှိသည်။
ဝန်ထမ်း၏ ဆွေမျိုးအရင်းအချာ သေဆုံးပါက ကုမ္ပဏီမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်း ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦး သေဆုံးပါက အဆိုပါဝန်ထမ်း၏ မိသားစုအား ကုမ္ပဏီမှ ထောက်ပံ့ငွေပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မဖြစ်မနေ အသုံးစရိတ်များအား ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ပါက အရေးပေါ်ချေးငွေ (emergency loan) လည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။
IME Group အနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများ စိတ်ကျေနပ်မှု အား သိရှိနိုင်ရန်အတွက် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိသည်။ ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း IME Construction မှ ဝန်ထမ်းများအား စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာ ဖြေဆိုသူ ၈၂% ရှိခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူများအနက်မှ
၈၀% သည် IME Construction သည် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိသော လုပ်ငန်းခွင်ဟု ယူဆကြသည်။
၇၂% သည် IME Group ၏ vision နှင့် mission ကို သိရှိသူများဖြစ်သည်။
၇၁% သည် ၄င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အား ယုံကြည်ကြသည်။
၇၀% သည် တက်ရောက်ခဲ့သော သင်တန်းများပေါ်တွင် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိကြသည်။
ဝန်ထမ်းများ၏ ရုံးပျက်ကွက်မှုနှုန်းမှာ ၅% မျှသာရှိပြီး ထိုပမာဏသည် ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်အပေါ်တွင် ကိုယ်နှင့်စိတ်နှစ်မြုပ်နိုင်မှုအား ထင်ဟပ်ပြနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော်လည်း Southern World Mining ကုမ္ပဏီအား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုရှိခဲ့သဖြင့် ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ turnover rate သည် ၄၄% အထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများအား ရေရှည်တွင် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန်အလို့ငှာ မန်နေဂျာများ၏ အရည်အသွေးပိုမိုတိုးတက်ရေးနှင့် ဆန်းသစ်သော အကျိုးခံစားခွင့်များ ပေးအပ်နိုင်ရေးတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှက်ရှိသည်။
IME Group အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအား ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် မကြာသေးမီက လိုအပ်သည့် ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးများကို လေ့လာစမ်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယခင်နှစ်အတွင်း ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ မြန်မာကျပ် ၃၆သန်း ရှိခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် ဘဏ္ဍာရေး၊ လုံခြုံမှုနှင့် တစ်ဦးချင်းအရည်အချင်းတိုးတက်ရေး စသည့်သင်တန်းများအတွက် အများဆုံးသုံးစွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါအရည်အသွေးများသည်လည်း ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်အတွက် လိုအပ်သည့်ကဏ္ဍများဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယခင်နှစ်တွင် သင်တန်းချိန်နာရီပေါင်း ၁၃,၀၀၀ ကျော် ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလျှင် ပျှမ်းမျှသင်တန်းချိန် ၂၁ နာရီခန့် ရရှိခဲ့သည်။
IME Group ၏ လည်ပတ်နေသော လုပ်ငန်းများတစ်ခုချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဥ်းစား၍ လုပ်ငန်းစု တစ်ခုချင်းစီသည် မိမိတို့အတွက် လိုအပ်မည်ဟုယုံကြည်ရသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ IME Construction အနေဖြင့် OHS စံနှုန်းများချမှတ်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးအသက်ကယ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ဝတ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
IME Group တွင် ယခင်နှစ်အတွင်း မတော်တဆဖြစ်ပွားမှု ၁၁ခု ရှိခဲ့ပြီး IME International တွင် ၁၀ခု ဖြစ်ပွား၍ IME Construction တွင် ၁ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သို့သော် သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကုမ္ပဏီ၏ Frequency rate (မတော်တဆဖြစ်ပွားသည့်အရေအတွက်အား အလုပ်ချိန်နာရီ တစ်သန်းနှင့် စားခြင်းဖြင့် ရရှိလာသောအရေအတွက်) မှာ ၉ ဖြစ်သည်။
IME Groupအနေဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား သက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည့် ကုမ္ပဏီ၏ လှုပ်ရှားမှုများအား တက်နိုင်သမျှ လျော့ချရန်အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
IME Group အနေဖြင့် စွမ်းအင်ပေါင်း ၂,၃၇၀ MWh အား သုံးစွဲခဲ့ပြီး အဆိုပါအသုံးပြုမှု၏ ၆၀% ကို IME International နှင့် ၂၁%ကို IME Construction တို့မှ သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။
IME Group အနေဖြင့် စွမ်းအင် ၃ မျိုးဖြစ်သည့် ဒီဇယ် ၆၄%၊ လျှပ်စစ် ၂၉% နှင့် ဓါတ်ငွေ့ ၇% တို့အား သုံးစွဲခဲ့သည်။
IME Group တွင်
ဝန်ထမ်းတစ်‌ဦးလျှင် GHG intensity အနေဖြင့် ၁,၀၈၇ kg eq. of CO2 အား ကိုယ်စားပြုသည့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာလည့် GHG intensity ၇၁၁,၂၀၉ kg eq. of CO2 ရှိခဲ့သည်။
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလျှင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ၃,၆၂၅ KWh ရှိခဲ့သည်။
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလျှင် ရေ ၆ cubic meter အသုံးပြုခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၃,၉၂၈ cubic meter အသုံးပြုခဲ့သည်။
IME Group အနေဖြင့် အဆိုပါစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုများအား ‌နောင်တွင်လျော့ချနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် clients များအား အကောင်းမွန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသော ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိပါသည်။ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း transactions ပေါင်း ၂၁,၇၀၀ ကျော်ရှိခဲ့သည်။ Clientsများထံမှ တိုင်ကြားမှုအနေဖြင့် ၆၄ ခုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး transactions ၁,၀၀၀ လျှင် ၃ခုနှုန်း ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ တိုင်ကြားမှုများအနက် ၈၂% မှာ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်မှုရှိခဲ့သည်။
Clients များအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်တွင် ကျေနပ်မှုရှိသည်ကို ပုံမှန် ကောက်ယူလျှက်ရှိသည့် ‌အောက်ဖော်ပြပါ သုံးစွဲသူစိတ်ကျေနပ်မှုရလဒ်များအရ သိရှိရပါသည်။
Customer satisfaction Index ၇၇% ၈၇% ၉၆%
IME Group အနေဖြင့် suppliers ပေါင်း ၁,၃၀၀ ကျော် ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိပြီး အဆိုပါ suppliers များအနက် ၉၆% မှာ မြန်မာကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။ Suppliers များအနေဖြင့်လည်း မြန်မာပြည်တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား ဖန်တီးထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လုပ်ဆောင်နေသူများဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် supply chain အား အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ယခင်နှစ်အတွင်း audit စစ်ဆေးခြင်း ၉ ခု လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ လာမည့်နှစ်များအတွင်း supply chain quality အား ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပရဟိတလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် မြန်မာငွေကျပ်သန်း ၁၁၀ အားလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလှူဒါန်းမှုများအနက်
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မီးလောင်မှုတစ်ခုကြောင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးနေထိုင်သည့် ကျေးရွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည့်အတွက် အဆိုပါကျေးရွာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် လှူဒါန်းခဲ့ခြင်း၊
ကင်ဆာဌာနအတွက် လိုအပ်သည့် ဆေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် infusion pump, syringe pump, rituximab, bed chat, Ect များ လှူဒါန်းခြင်း၊ စသည့် လှူဒါန်းမှု ၂ ခုမှာ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။
IME Group အနေဖြင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများအား ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။